Vavaka mivavaka 50 mfm manohitra ny faharatsiana ao an-tokantrano | FIVAVAHANA VAVAKA
Home Teboka am-bavaka 50 mfm vavaka manondro manohitra ny faharatsiana ao an-tokantrano
50 mfm vavaka manondro manohitra ny faharatsiana ao an-tokantrano
9 Enga anie ho tapitra ny faharatsian'ny ratsy fanahy; fa aorio Andriamanitra marina ny fo sy ny voa.
6 Fa ny zanaka mahamenatra ny rainy, ny zanakavavy mitsangana hanohitra ny reniny, ny vinantovavy amin'ny rafozani-vavy; Ny fahavalon'ny olona dia lehilahy ao an-tranony. 7 Ary hiandrandra ny Tompo aho; Hiandry an'Andriamanitry ny famonjena ahy aho; hihaino ahy ny Andriamanitro.
Faharatsiana ao an-tokantrano marina. Ireo dia fahavalo ao an-trano, ireo dia tsy mahatanty ny fahombiazanao sy ny fivoaranao. Mialona anao izy ireo satria mino fa mbola mamirapiratra ny hoavinao. Ireo koa dia fahavalo tsy mampino, olona izay miiba manodidina anao ho namanao nefa manafina anao miafina ao ambadiky ny hamono ny nofinao. Ity vavaka vavaka 50 mfm manohitra ny faharatsiana ao an-tokantrano ity dia ho an'ny olona toy izany. Ity takelaka vavaka mfm ity dia avy amin'ny Dr. Olukoya avy amin'ny tendrombohitra afo sy minisitera fahagagana. Izy ireo dia hitari-dalana anao rehefa miantso an'Andriamanitry ny ady ianao hamoaka sy handringana ny fahavalon'ny ankohonana rehetra izay manisy ratsy ao aminao sy ny ankohonanao.
Tsy maintsy mijoro tsara amin'ny fanovana vavaka ianao. Ny devoly dia iraka hamono sy handrava, ny devoly dia miasa amin'ny alàlan'ny masoivohony, ny fahavalo mitazona ny trano. Mety tsy fantatrao izy ireo fa rehefa mivavaka ianao fa mfm manohitra ny haratsiam-pianakaviana dia hampiharihary azy rehetra Andriamanitra. Hitsangana izy ka hanaparitaka azy rehetra, hampiala ny loha ratsy rehetra any sy ny teti-dratsy ataon'i satana Izy. Aza milavo lefona, mivavaha mba hivoahanao anio. Mahita anao mandeha amin'ny fandresena aho.
50 Mfm vavaka dia manondro ny faharatsiana ao an-tokantrano
1. Avelao ny làlan-java-dratsy rehetra hamelezana ahy, ny anaran'i Jesosy izao.
2. Ireo izay mihomehy ahy maneso dia hahita ny fijoroako ho vavolombelona ary ho menatra azy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy.
3. Avelao ny fikasan-dratsin'ny fahavalo manohitra ahy hamely ny tavany, amin'ny anaran'i Jesosy.
4. Avelao ny drafitra rehetra hanesoana ahy hitodika amin'ny fijoroako ho vavolombelona, ​​amin'ny anaran'i Jesosy.
5. Avelao ny fahefana rehetra hanohana ny fanapahan-kevitra ratsy hanoherana ahy ho menatra sy ho rava amin'ny anaran'i Jesosy.
6. Aoka ny olona mafy loha rehetra mifandimby hamely ahy ho faty sy ho faty amin'ny anaran'i Jesosy.
7. Aoka ny fiarovana mafy ny demonia isan-tokatrano manohitra ahy, hotorotoroina amin'ny anaran'i Jesosy.
8. Aoka ny fanahin'i Balama rehetra hanakarama ahy hanozona araka ny baikon'i Balama, amin'ny anaran'i jesosy
9. Aoka ny mpanolo-tsaina ratsy rehetra miady ny hoaviko mba ho lanin'ny afo amin'ny anaran'i Jesosy izao.
10.Azo ny olona rehetra miantso ho andriamanitra eo amin'ny fiainako ho latsaka araka ny baikon'i Faraona, amin'ny anaran'i Jesosy.
11.Aoka ho menatra ny fanahin'ny Heroda rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy.
12.Azo ny fanahin'ny Goliata rehetra handray ny vato afo, amin'ny anaran'i Jesosy.
13.Aoka ny fanahin'i Faraona rehetra ho latsaka amin'ny Ranomasina Mena izay ataon'izy ireo, amin'ny anaran'i Jesosy.
14.Aoka ny fanodikodinam-bolongana rehetra mikendry ny hanova ny fiainako ho diso fanantenana, amin'ny anaran'i Jesosy.
15.Aoka ny mpampita vaovao tsy mahasoa amin'ny hatsaram-panahiny hahasoa ahy mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy.
16.Aoka aseho amin'ny anaran'i Jesosy ny zava-dratsy miafina rehetra manodidina ahy.
17.Izay manara-maso hamely ahy ny maso rehetra manara-maso ratsy, jamba amin'ny anaran'i Jesosy.
18.Azoana esorina amin'ny fiainako ny vokatry ny fiantraikany ratsy rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy.
19.Mandidy ny tsodrano rehetra alaina amin'ny ody atao amin'ny ody ratsy aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
20.Nandidy ny fitahiana rehetra alain'ny fanahy ratsy hovotsorana aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
21.Nandidy ny fitahiana rehetra noraisin'ny fanahin'ny razana halefa aho amin'ny anaran'i Jesosy.
22.Nandidy ny fitahiana rehetra noraisin'ny fahavalo feno fialonana aho ho afahana amin'ny anaran'i Jesosy.
23.Mandidy ny tsodrano rehetra nofafain'ny mpiasam-panjakan'i satana aho hamotsorana azy, ao amin'ny
24.Nandidy ny fitahiana rehetra voafindra ho amin'ny fanapahana halefa aho amin'ny anaran'i Jesosy.
25.Nandidy ny fitahiana rehetra raisin'ireo mpitondra ny maizina mba hafahana amin'ny anaran'i Jesosy aho.
26.Nandidy ny fitahiana tsirairay avy voafitaky ny hery ratsy mba hafahana aho amin'ny anaran'i Jesosy.
27.Nandidy ny fitahiako rehetra nesorina tamin'ny faharatsiana ara-panahy any amin'ny toerana any an-danitra ny hamoahana azy, amin'ny anaran'i Jesosy.
28Didy ny voa demonia rehetra nambolena aho mba hanakana ny fivoarako, hatsongo amin'ny anaran'i Jesosy.
29.Ny torimaso ratsy natao mba hanisy ratsy ahy dia tokony hiova fo amin'ny torimaso maty, amin'ny anaran'i Jesosy.
30.Azo ny fiadiana rehetra sy ny fitaovan'ny mpampahory ahy hiasa azy amin'ny anaran'i Jesosy.
31.Mandrava ny afon'Andriamanitra mamono hery izay miasa amiko, amin'ny anaran'i Jesosy.
32Miala amin'ny anaran'i Jesosy ny torohevitra ratsy rehetra izay omena ahy.
33.Izay rehetra mihinana nofo sy misotro ra dia tafintohina sy ho lavo, amin'ny anaran'i Jesosy.
34. Mandidy ny mpanenjika mafy ny fiainako rehetra aho mba hianjera sy ho faty amin'ny anaran'i Jesosy.
35Ny rivotra sy ny masoandro ary ny volana mihazakazaka mifanohitra amin'ny fisian'ny demonia rehetra ao amin'ny taniko, amin'ny anaran'i Jesosy.
36.Izay mpanina, tsy lanin'ny asako, amin'ny anaran'i Jesosy.
37.Tsy avela ho maina amin'ny fakany ny hazo rehetra izay azon'ny fahavalon'ny ankohonany amin'ny anaran'ny
38.Nofoako ny sikidy rehetra, ny ozona ary ny ozona rehetra izay manohitra ahy, amin'ny anaran'i Jesosy.
39. Amin'ny alalàn'i Jesosy ny ozona rehetra,
40.Handrenesany lela ratsy amiko ny lela afo mirehitra amin'ny anaran'i Jesosy.
41.Ao ny fanambarana rehetra nolazaiko hamelezana ahy amin'ny lelan-poizina manameloka izao !!!, amin'ny anaran'i Jesosy.
42. Izaho dia nanala ny tenako tsy ho amin'ny fanahy samy hafa faritany, amin'ny anaran'i Jesosy.
43. Izaho dia manala ny tenako amin'ny herin'ny ody sy ny ody, amin'ny anaran'i Jesosy.
44. Nialako tamin'ny fanandevozana satana rehetra, tamin'ny anaran'i Jesosy.
45. Nofoako ny herin'ny ozona rehetra tato an-dohako, amin'ny anaran'i Jesosy.
46. ​​Mamatotra an'io lehilahy mahery io amin'ny fiainako aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
47. Mamatotra an'io lehilahy mahery io amin'ny fianakaviako aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
48. Mamatotra an'io lehilahy mahery io amin'ny fitahiako aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
49. Mamatotra an'io lehilahy mahery io amin'ny asako aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
50. Mandidy ny fitaovam-piadiana mahery vaika aho mba ho fongotra tanteraka, ao amin'i Jesosy.
Misaotra anao Jesosy.
Previous lahatsoratraZava-bavaka 30 ho an'ny fanasitranana sy fanafahana
Next lahatsoratraNy vavaka vavaka dia manondro ny handrava fibroids
Teboka 10 ho an'ny mpitady asa
Teboka vavaka 75 hiadiana amin'ny herin'ny tranon'ny Raiko